Ungayilungisa njani into engekhoyo okanye ungavumelanisi abafowunelwa nge-iCloud kwi-iOS 7.1.2 | IPhone iindaba
UCarmen rodriguez | | IPhone iindaba, Izifundo kunye neencwadana
Kungenzeka ukuba xa ufaka umfowunelwa kwisicelo sakho soNxibelelwano se-iPhone, ayiveli kwisicelo sedesktop. Isicelo esiza kugcina esi sicelo sihambelane, phakathi kwabanye, ICloud kwaye emva kokuhlaziya kwi-iOS 7.1.2 kukho abasebenzisi abathi ayizivumelanisi okanye ngakumbi, abafowunelwa bayanyamalala.
Kuya kufuneka ndiyikhumbule loo nto Ukusebenza kwe-iCloud Kwi-iPhone okanye nakweyiphi na iMac inomda kumzuzu apho sinayo isixhobo esiqhagamshelwe kwi-wifi, Ukuba uyeka ukucinga ukuba kuyacaca, kungenjalo siya kuchitha okungapheliyo kwedatha sisenza iikopi zokulondoloza kunye nokuhlaziya naziphi na izicelo esizivumelanisileyo nge-iCloud.
Yathi leyo masibone indlela yokusombulula ingxaki esithetha nathi namhlanje.
1 Gcina abafowunelwa abatsha kwi-iCloud ngokungagqibekanga
2 Khangela abafowunelwa abangavumelaniswanga
Gcina abafowunelwa abatsha kwi-iCloud ngokungagqibekanga
Ngokwesiqhelo le mpazamo yenzeka kubantu abanee-imeyile ezininzi ezilungiselelwe kwi-iPhone kwaye amaxabiso asisiseko awahambisi ungqamaniso kwinkonzo ye-iCloud, kodwa kwi-imeyile yokugqibela emiselweyo. Masibone ukuba ungayenza njani:
Ukufikelela kwi Imeyile, abafowunelwa, ikhalenda.
Skrolela ezantsi kule menyu de ufumane icandelo elijongana nabafowunelwa. Ngoku uza kubona ukuba iyavela njengokhetho lokugqibela kulungelelwaniso ukumisela i «Iakhawunti emiselweyo«
Qiniseka ukhethe iCloud
Kungenzeka ukuba ukhetho lwe «Iakhawunti emiselweyo»Akubonakali kuwe, le yimeko yabantu abathi bane-akhawunti enye ye-imeyile emiselweyo kwaye iyafana njengoko benayo IDA, ke akukho nto iyakudingeka, impazamo ayiveli kweli nqanaba.
Khangela abafowunelwa abangavumelaniswanga
Singakuthintela ukunyamalala kwabafowunelwa ngokusebenzisa ungqamaniso ebendiluchazile ngaphambili, kodwa kuthekani ngabafowunelwa abangahambelaniyo? Kwenzeka ntoni kubo kukuba uqhubeke nokudibanisa kuzo zonke izixhobo kuya kufuneka uzisebenze kwasekuqaleni. Makhe sibone ukuba sizazi njani:
Qala isicelo Ifowuni
Thepha kwi Amaqela (ukuya ngasekunene). Bonke abafowunelwa baya kuvela ngokweakhawunti ye-imeyile, kuxhomekeke kwezi uziqwalaseleyo.
Sukukhangela ngaphakathi kwecandelo le-iCloud «Konke kwi-iCloud«
Cofa apha Ok (phezulu ekunene)
Ngoku a Uluhlu lwabafowunelwa abangavumelaniyo okanye ilahlekile kwezinye iifowuni.
Ukusuka apha kuye ngokokubona kwakho ukuba wenzeni ngabo, uzicime kuba azibalulekanga okanye uphinde ubongeze. Yintoni ibaluleke kakhulu kukuba xa sele itshekhi yenziwe kwaye nokuba ufuna ukuphuma ngokulula okanye ukuba ufuna ukongeza abafowunelwa abafunyenweyo, cofa kwakhona «Konke kwi-iCloud« ngaphambi kokuphuma kolu khetho lweqela.
Ndiyathemba ukuba iluncedo kwaye ukuba unamathandabuzo, Nika izimvo !!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ungayilungisa njani into engekhoyo okanye ungavumelanisi abafowunelwa nge-iCloud kwi-iOS 7.1.2
Osiris Armas Medina sitsho
Kwaye kuthekani ngabo kuthi "kuQhakamshelwano" singafumani "iakhawunti emiselweyo" isithuba (abanye bayenza) kwaye kwisicelo "sefowuni" asifumani nto kumaqela aphezulu ekunene?
Kuya kufuneka ndijonge kabini ukuba bendino-7.1.2 kuba kubonakala ngathi uthetha ngenye ifowuni ...
Phendula u-Osiris Armas Medina
Nceda ungalihoyi eli nqaku. Isiqingatha sezinto asichazwanga kakuhle kwaye ungaphulukana nabo bonke abafowunelwa bakho ukuba uyayenza le nto ithethwayo.
Enkosi Maica, bendixakene noko. Ndine-imeyile engaphezulu kwesinye emiselweyo kwi-iPhone kwaye olo khetho alusebenzi kum ...
ANDIQINISEKISI AMANQAKU, IMIFANEKISO KANYE IKHALENDA OKUFANELE NDIKWENZE
Phendula ku gladyslozano3@icloud.com
URicardo Leon sitsho
Phendula uRicardo Leon
Ndiyifumana phi ifowuni yesicelo, iqela, njl.
Ndiyabulela kakhulu!!! Akukho mntu unokusombulula malunga nabafowunelwa bam abalahlekileyo kwaye enkosi kwesi sikhokelo ndisisombulule.
Ndiyabulela kakhulu .. ngokugqwesileyo .. abafowunelwa bam bavela kwakhona, 3! Iziphumo yayiyingxaki yokuvumelanisa nge-iCloud .. enyanisweni ndibabone bonke ku-whatsapp bengayithandi loo nto kwifowuni zonxibelelwano. Ingcaciso yakho icacile !!
UAlan Bredice sitsho
Kwenzeka kum ukuba xa ndongeza ngesandla umfowunelwa akabonakali kuluhlu loqhakamshelwano, kuphela kuluhlu lweWhatsApp (ukuba inayo). Kodwa xa ndicofa inombolo yomnxeba ongabonakali, xa ndimbiza ndifumana igama. Ngaba uyazi ukuba kutheni oko kusenzeka? Igcinwa phi?
Phendula uAlan Bredice
Enkosi kakhulu! Sele ndiyisombulule, enkosi kakhulu.
UMario Abel Urbina sitsho
Molweni nonke. Abafowunelwa bam bavela kwiakhawunti yam ye-icloud kwi-PC yam, kodwa hayi kwi-iphone yam. Sele ndiyenzile inkqubo yeqela ngazo zonke iiakhawunti kwaye akukho nto. Umntu othile unokundinceda.
Phendula uMario Abel Urbina
Molo, xa ndivula iselfowuni namhlanje, ndifumana i-wasap, ngokungathi andibhalanga nto ukusukela ngoko kwaye bendiqhubeka nokuyisebenzisa kude kube izolo.
UJuanje Peralta sitsho
Enkosi ngoncedo! Abanye abafowunelwa kwakungekho ndlela yokuba bavele, kwaye ngenxa yoku sele isonjululwe. Imibulelo emininzi!!
Phendula kuJuanje Peralta
Iposti enkulu undincede kakhulu umhle
ULUIS CHAVARRO sitsho
Ingxaki yam kukuba ndigcina umnxeba kwifowuni yam, emva koko ndiyikhangele kwaye ayifumaneki. Emva koko ndiye eWsap kuba ndiyazi ukuba ndithethile apho, ndihlela umfowunelwa, ndikope inombolo kwaye ndiye kumnxeba wokucofa, apho xa ndiyincamathisela INKWENKWEZI IYAWUQaphela UQHAGAMSHELWANO !! kwaye ubeke igama lakho nayo yonke into !! kodwa ukuba emva kweentsuku ezimbalwa indiza iyakuyikhangela, AYIBONI !!! kwaye kufuneka ndiphinde ukuhlela, ukukopa nokuncamathisela. EYE ndiyahlela kwaye ndikope ukuba ndingabizi nge-wsap kodwa ngomnxeba kuba umgangatho weefowuni ungcono, kwaye icebo lam alinamkhawulo.
Phendula uLUIS CHAVARRO
Ingxaki yam kukuba ndigcina umnxeba kwifowuni yam, emva koko ndiyikhangele kwaye ayifumaneki. Emva koko ndiye eWsap kuba ndiyazi ukuba ndithethile apho, ndihlela umfowunelwa, ndikope inombolo kwaye ndiye kumnxeba wokucofa, apho xa ndiyincamathisela INKWENKWEZI IYAWUQaphela UQHAGAMSHELWANO !! kwaye ubeke igama lakho nayo yonke into !! kodwa ukuba emva kweentsuku ezimbalwa indiza iyakuyikhangela, AYIBONI !!! kwaye kufuneka ndiphinde ukuhlela, ukukopa nokuncamathisela. EYE ndiyahlela kwaye ndikope ukuba ndingabizi nge-wsap kodwa ngomnxeba kuba umgangatho weefowuni ungcono, kwaye icebo lam alinamkhawulo. Andiyifumani imiyalelo yeli tyala naphi na.
IGameloft ipapasha itreyila yoLuhlu lwale mihla: 5